Faah faahino dheraad ah ayaa kaso baxaya qarax Mas’uul ka tirsan G/Banaadir oo lala eegtay iyo khasaaro ka dhashay | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Faah faahino dheraad ah ayaa kaso baxaya qarax Mas’uul ka tirsan G/Banaadir...
Faah faahino dheraad ah ayaa kaso baxaya qarax Mas’uul ka tirsan G/Banaadir oo lala eegtay iyo khasaaro ka dhashay
Jugta qarax xoogan ayaa waxaa daqiiqado kahor laga maqlay xaafaddo ka tirsan degmooyinka Gobolka Banaadir, kaasi oo sigaar ah uga dhaca agagaarka Xarunta degmada Deyliine ee Magaalada Muqdisho.
Qaraxaas oo ahaa nooca dhulka la geliyay ee laga hago meelaha fog-fog ayaa waxaa lala eegtay gaari uu la socday Xoghayaha maamulka degmada Deyniile ee Gobolka Banaadir, waxaana gaariga uu qaraxa ku qabsaday xili uu marayay agagaarka Xarunta degmada.
Dad Goobjoogayaal ah oo la hadlay najah online ayaa sheegay in qaraxaas uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, hayeeshee uu badbaaday Xoghaye Mahad Sharaawe.
Inta la xaqiijiyay qaraxa ayaa waxaa ku dhintay laba ruux oo kamid ah oo goobta marayay, waxaana ku dhaawacmay qof kale, kaasi oo si deg deg ah loogula cararay Xarun Caafimaad, iyadoona goobta ay tageen Ciidamo Boolis ah, kadibna xiray.
Laamaha amniga dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka degmada Deyniile ee Gobolka Banaadir ayaan ka hadlin qaraxaas dhacay. Qaraxyada noocaan oo kale ah ayaa waxaa Mas’uuliyadooda sheegtay Al-shabaab.
Maqaal horeAl-shabaab oo weerar ku qaaday Saldhig Ciidan oo ku yaalla Jubbada Hoose
Maqaal XigaMadaxda Dowlad Goboleedyada iyo Beesha Caalamka oo kulan u socda